Kopakopan-tànana! Hiainga amin'ny zavamaniry vaovao isika!
Ry namana malala, salama maraina daholo! Androany ny 8 Jona 2017, voninahitra lehibe ho antsika ny mijoro eto, mitazona ny lanonam-panokafana ny Enuo mould Co., Ltd., ary manatrika ny fotoana tsy hay hadinoina tamin'ny fisokafan'ny orinasa. Misaotra ny fandraisana anjara mavitrika ataon'ny mpiara-miombon'antoka Enuo Mould, noho ny fanohanan ... HAMAKY BEBE KOKOA
Oay! fialan-tsasatra mahafinaritra any amoron-dranomasina!
-Fialan-tsasatra mankany amin'ny morontsirak'i Dapeng Ry mpiara-miasa lasitra Enuo malala: isaky ny miova ny vanim-potoana dia fantatra fa mandeha ny fotoana Amin'ny tsy fahatsiarovan-tena dia avadika amin'ny kalandrie 2018 ny volana aogositra. Nandeha tsikelikely ny fahavaratra ary ho avy ny fararano. Ho an'ireo mpiara-miasa lasitra Enuo rehetra, ny lasa ... HAMAKY BEBE KOKOA
-Tetezana any Nankunshan lohataona lohataona lohataona lohataona orana mandritra ny andro maro ary tsy fantatro fa lasa ny lohataona. Vantany vao milamina ny andro, tsapako fa efa ela ny fahavaratra. Ny fotoana dia ao anatin'ny lalanantsika tsy nahy foana, navadika tamin'ny Jona ny tetiandro 2019, ary ny ... HAMAKY BEBE KOKOA
Andro mahatsikaiky ny androany!
-Ny fitsangatsanganana any amin'ny Farihy Songshan Lake dia heverina ho vanim-potoana tantaram-pitiavana. Fivoriana eo amin'ny toerana izay voninkazo paiso no mahamenatra ny ankamaroan'ny olona ao am-pony. Na izany aza, amin'ny maha molera antsika, matetika isika dia mila mametraka am-potoana vonjimaika ny tononkalon'ny fo ho fampitana ilay tetikasa sy ... HAMAKY BEBE KOKOA